တဏှာဆိုတာ မြင်စရာအာရုံ၊ ကြားစရာအာရုံ စတဲ့ အာရုံတွေမှာ ငြိတွယ်ပြီးတော့ စွဲလန်းနေတာ၊ တပ်မက်နေတာ ဖြစ်တယ်။ သစ္စာလေးပါးမှာ သမုဒယသစ္စာအရ တဏှာကို ယူရတယ်။ ဆိုတော့ တဏှာဆိုတာ ဒုက္ခ အစုစုရဲ့ အကြောင်းရင်း တရားခံပဲ။ ဒါ့ကြောင့် တဏှာအကြောင်း ကောင်းကောင်း သိသင့်တယ်။ တဏှာ ပါးရင်ပါးသလောက် ဒုက္ခတွေ၊ ပြဿနာတွေက နည်းနည်းချင်း ပါးပါးသွားလိမ့်မယ်။ တဏှာနိရောဓော နိဗ္ဗာနံ ဆိုတဲ့အတိုင်း တဏှာကုန်ရင် နိဗ္ဗာန် ရလိမ့်မယ်။
အဲဒီတဏှာကုန်ဖို့အတွက် လုပ်ရမှာက ဧကာယနော အယံ ဘိက္ခဝေ မဂ္ဂေါ ဆိုတဲ့ အတိုင်း တစ်ကြောင်းတည်းသော လမ်းပဲ ရှိတယ်။ အဲဒါက သတိဦးဆောင်တဲ့ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးပါပဲ။
အာရုံအနေနဲ့ ပြောရင် အာရုံခြောက်ပါးရှိတဲ့အတွက် တဏှာကလည်း (၆) မျိုး ရှိတယ်။ ဖြစ်ပုံ အခြင်းအရာ အနေနဲ့ ပြောရင်တော့ (၃) ပါးပဲ ရှိပါတယ်။
ကာမတဏှာကို အဋ္ဌကထာတွေက နှစ်မျိုး ဖွင့်ကြတယ်။
နံပါတ် (၁) အဓိပ္ပါယ်က ကာမတဏှာဆိုတာ ကာမာဝစရ (၁၁) ဘုံကို စွဲလန်းတပ်မက်နေတာ။ သတ္တဝါတွေဆိုတာ ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ ဘုံဘဝလေးတွေမှာ စွဲလန်း နေတတ်ကြတယ်။ တွယ်တာ နေတတ်ကြတယ်။
ကာမာဝစရ (၁၁) ဘုံမှာ လူ့ဘုံနဲ့ နတ်ပြည် (၆) ထပ်ကတော့ စွဲလန်းစရာ ကောင်းတာ မှန်တယ်။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကလည်း သူတို့ဘဝနဲ့ သူတို့ ကျေနပ် ပျော်ရွှင်နေကြတာပဲ။ အပါယ်လေးဘုံမှာ အထူးသဖြင့် ငရဲပြည်မှာ ဖြစ်ပြီ ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ ငရဲ့ဘုံမှာ တွယ်တာမှု ဘယ်ရှိမှာလဲ။ ငရဲပြည်ကနေ ကျွတ်ချင် လွတ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ ပေါ်နေမှာပေါ့။ ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ ဘုံမှာ မကြိုက်တဲ့ ဒေါသကိလေသာ နောက်က လိုက်လာတဲ့ ကျွတ်ချင်လွတ်ချင်တဲ့စိတ်၊ အခြားတစ်နေရာကို ရောက်ချင်နေတဲ့ စိတ်ကလေးက တဏှာပါပဲ။
ကာမတဏှာရဲ့ နံပါတ် (၂) အဓိပ္ပါယ်က မိမိ တွေ့ကြုံ ခံစားနေရတဲ့ အာရုံ (၆) ပါး တစ်ပါးပါးမှာ ငြိတွယ် စွဲလန်းနေတဲ့ သဘောပဲ။ အဲဒါကြောင့် သံယုတ်ပါဠိတော် မက္ကဋသုတ်မှာ မြတ်စွာဘုရားက တဏှာကို မျောက်နှဲစေး (ကော်) နဲ့ ခိုင်းနှိုင်းခဲ့တာ။ ကော်က ထိတဲ့အရာကို ကပ်ထားသလို သတ္တဝါတွေရဲ့ စိတ်ကလည်း အာရုံခြောက်ပါး တစ်ပါးပါးမှာ သွားကပ်နေတတ်တယ်။ ကာမတဏှာနဲ့ စွဲလန်း တပ်မက်တဲ့အခါမှာ အခြားအမြင်တွေ မရောယှက်တဲ့ စွဲလန်းတပ်မက်မှု သက်သက် ဖြစ်တယ်။
ဘဝတဏှာကိုလည်း အဋ္ဌကထာက နှစ်မျိုး ဖွင့်ပြတယ်။
နံပါတ် (၁) အဓိပ္ပါယ်က ရူပါဝစရ (၁၆) ဘုံ၊ အရူပါဝစရ (၄) ဘုံ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရင် ရူပါဝစရဈာန်၊ အရူပါဝစရဈာန်တွေကို စွဲလန်းတပ်မက်နေတာကို ပြောတာပါ။ သူက နည်းနည်း အဆင့်မြင့်လာတယ်။ ရူပါရုံစတဲ့ အာရုံငါးပါးနဲ့ ထိတွေ့လို့ ရတဲ့ အရာတွေကို မစွဲလန်းတော့ဘူး။ မကြိုက်တော့ဘူး။ စိတ်နဲ့လည်း ကာမဂုဏ် အာရုံတွေအကြောင်းကို တွေးတောမနေတော့ဘူး။ စိတ်နဲ့ပဲ ခံစားလို့ ရတဲ့ နီဝရဏကင်းတဲ့ ဈာန်တရားတွေမှာ ငြိတွယ် စွဲလန်းနေတာ။ အနာဂါမ်တွေတောင် ဒီတဏှာ ရှိသေးတယ်။
ဘဝတဏှာရဲ့ နောက်အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးက ကိုယ်တွေ့ကြုံ ခံစားနေရတဲ့ အာရုံဟာ မြဲတယ်ဆိုတဲ့ သဿတဒိဋ္ဌိ အမြင်နဲ့ စွဲလန်းတပ်မက်နေတာ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အာရုံ၊ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ခံစားမှုတွေမှာ ငြိတွယ် စွဲလန်းနေတဲ့ တဏှာသဘော ဖြစ်တတ်တာ သဘာဝပဲ။
လူဆိုတာက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရာလေးတွေဆိုရင် မပြတ်မဆဲ အမြဲ တည်ရှိနေစေချင်တာကြတာပဲ။ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ အာရုံကို စွဲလန်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒါလေးက အမြဲတည်ရှိနေတယ်၊ အမြဲတည်တံ့နေမှာပဲ ဆိုတဲ့ မှားယွင်းတဲ့အမြင် (မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ)နဲ့ အတူတူ ဖြစ်တာ။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် (၂၊၂၀၂) မှာတော့ သဿဒိဋ္ဌိသဟဂတော ဟိ ရာဂေါ ဘဝတဏှာတိ ဝုစ္စတိ လို့ ဆိုထားတယ်။ ကိုယ်က မြဲတယ်လို့ ထင်ထားပေမဲ့ အနိစ္စသဘောနဲ့ ပျက်စီးသွားရင် ဒုက္ခ လှလှ ရောက်တော့တာပဲ။ အဲဒါကြောင့် တဏှာက ဒုက္ခရဲ့ ဇစ်မြစ်လို့ ဟောခဲ့တာ။
ဝိဘဝတဏှာကိုလည်း အဋ္ဌကထာတွေက ပြောတဲ့အတိုင်း အဓိပ္ပါယ်နှစ်မျိုးနဲ့ မှတ်ရမယ်။ ပထမအဓိပ္ပါယ်က လက်ရှိ ရနေတဲ့ ဘဝကို ပြတ်ဆဲစေလိုတာ၊ မလိုချင်တော့တာ။ ဒါကလည်း တဏှာ တစ်မျိုးပဲ။ လက်ရှိဘဝကို မလိုချင်တာက ဘဝကို တွယ်တာတဲ့ တဏှာအစစ် မရှိလို့ မဟုတ်ဘူး။ လက်ရှိ ဘဝကို မနှစ်မြို့တဲ့ ဒေါသ၊ မကြိုက်တဲ့ အာဃာတတွေကြောင့် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အနေအထားကို လိုချင်တာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ ဖြစ်တဲ့ တဏှာပေါ့။
မြတ်စွာဘုရားက "ဒုက္ခာယ ဝေဒနာယ ပဋိဃာနုသယော၊ သော အနုသေတိ" လို့ ဟောခဲ့တာ။ ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ နောက်မှာ ပဋိဃ (မကြိုက်မနှစ်သက်မှု) ဆိုတဲ့ ကိလေသာက ကိန်းနေတတ်တယ်။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် (၂၊၂၀၃) မှာတော့ "'ဒုက္ခီ သုခံ ပတ္ထယတိ" လို့ ဆိုထားတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ချမ်းသာကို တောင်းတတယ်တဲ့။ လက်ရှိ ဖြစ်နေတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကို မေ့ထားပြီး မရောက်သေးတဲ့ အနာဂတ်ကို မျှော်မှန်း တမ်းတနေတာ။ အဲဒါက တဏှာရဲ့ သဘောပါပဲ။
ဝိဘဝတဏှာရဲ့ ဒုတိယအဓိပ္ပါယ်က ပိုပြီး သိဖို့ ကောင်းတယ်။ ကိုယ် တွေ့ကြုံ ခံစားနေရတဲ့ အာရုံကို ပြတ်ဆဲစေလိုတာ။ အဲဒါက ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ အမြင်နဲ့ စွဲလန်းတာပဲ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ် သဘောမကျတဲ့ အာရုံ၊ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ ခံစားမှုတွေဆိုရင် ပြတ်ဆဲစေလိုတဲ့ စိတ်၊ ပြီးသွားစေလိုတဲ့ စိတ်ကလေး ပေါ်လာတတ်တယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်သဘောမကျတာ၊ ကိုယ့်အနေအထားကို ကိုယ်မကျေနပ်တာတွေက ဝိဘဝတဏှာရဲ့ သဘောတွေပဲ။
ကိုယ် လက်ရှိ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ဘဝကို မကြိုက်ရင် ပဋိဃဆိုတဲ့ ဒေါသကိလေသာ နောက်က လိုက်လာပြီ။ ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ နောက်မှာ ပဋိဃဆိုတဲ့ ဒေါသကိလေသာ မသိမသာ ကိန်းနေတတ်တဲ့ သဘောပဲ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ပြတ်ဆဲစေလိုတဲ့ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ အမြင် ပါလာပြီ။ အာရုံတွေရဲ့ သဘောက အနိစ္စ (မမြဲခြင်း) သဘောတော့ ရှိတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က မကောင်းတာ လုပ်ထားပြီဆိုရင် အဲဒီမကောင်းတဲ့ အာရုံတွေက တော်တော်နဲ့ မပြီးနိုင်ဘူး။ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ထပ်ထပ် ဖြစ်နေတော့တာပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ အာရုံတွေ၊ ဒုက္ခဝေဒနာတွေကို ပြတ်ဆဲစေချင်တဲ့ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ သဘောက ဝင်လာရော။ ဒါဆိုရင် တစ်ပူပေါ် နှစ်ပူဆင့်တော့တာပေါ့။
ပုထုဇဉ်နဲ့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကွာတာက ပုထုဇဉ်တွေက ကာယိကဝေဒနာကိုရော စေတသိကဝေဒနာကိုရော နှစ်မျိုးလုံး ခံစားတယ်။ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ကာယိကဝေဒနာကိုပဲ ခံစားရတယ်။ သတိဆိုတဲ့ အထိန်းအကွပ်နဲ့ နေတော့ စေတသိကဝေဒနာက နောက်က လိုက်မလာနိုင်တော့ဘူး။
ဝေဒနာသံယုတ်၊ ဂေလညသုတ်မှာ မြတ်စွာဘုရားက မကျန်းမမာ ဖြစ်နေတဲ့ ဂိလာနရဟန်းဆောင်ကို သွားပြီး ဟောခဲ့တာလေး ရှိတယ်။ အဲဒီသုတ်ထဲမှာ ဒုက္ခဝေဒနာဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို မှီပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာ အနိစ္စသဘော ရှိတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို မှီပြီး ဖြစ်တဲ့ ဒီဒုက္ခဝေဒနာကလည်း အနိစ္စသဘောပဲဆိုပြီး ဟောခဲ့တယ်။ ဒီတရားသဘောကို နားလည်ရင်တော့ ဝိဘဝတဏှာကို ပယ်ဖျောက်နိုင်မယ်။ အဲဒီသုတ္တန်မှာ မြတ်စွာဘုရားက ဖြေဆေး ပေးထားတယ်။ အဲဒါက သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးကို ပွားများဖို့ပါပဲ။ အဲဒီသုတ်မှာ ဒုက္ခဝေဒနာ၊ သုခဝေဒနာ၊ အဒုက္ခမသုခဝေဒနာဆိုတဲ့ ဝေဒနာ သုံးမျိုးလုံးက အနိစ္စပဲလို့ ဟောထားတယ်။
လူတွေက ချမ်းသာတာ၊ အဆင်ပြေနေတာကိုမှ အနိစ္စလို့ ထင်နေတတ်ကြတယ်။ ဆင်းရဲတာ၊ အဆင်မပြေတာတွေကလည်း အနိစ္စပဲလို့ သဘောပေါက်ရမယ်။ အောင်မြင်တာ၊ ချမ်းသာတာ၊ ကျော်ကြားတာတွေ အားလုံးက အနိစ္စပဲ။ အနိစ္စသဘောနဲ့ ခဏဖြစ်ပြီး ခဏခဏပျက်ပျက်သွားတဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ချမ်းသာမှု၊ ကျော်ကြားမှုတွေကို ခဏခဏ ဖြစ်နေအောင် လုပ်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ အောင်မြင်မှု စတာတွေက ကြာရှည်ခံမှာပဲ။
(၂၄၊ ၉၊ ၂၀၁၅) ရက်နေ့က ဟောခဲ့တဲ့ "တဏှာ သုံးပါး" ဆိုတဲ့ တရားကို အနှစ်ချုပ်ပြီး ရေးထားတာပါ။ တရားပွဲကို လာရောက်နာယူကြတဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်များကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
Photos by Mingalamaungme
Posted by Ashin Lokapala at 25.9.150comments
ဆွမ်းခံခြင်း (ALMS GATHERING)
ဆွမ်းခံခြင်း (ပိဏ္ဍပါတ) ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များနဲ့ ဘိက္ခုနီမများ ဆွမ်းရရှိဖို့ အလှူခံနည်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆွမ်းခံတာဟာ တောင်းစားတာနဲ့ ကွာခြားပါတယ်။ သူတောင်းစား တစ်ယောက်က တစ်ခုခု ရဖို့ နှုတ်နဲ့ တောင်းပြီး မေတ္တာရပ်ခံတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များနဲ့ ဘိက္ခုနီမများကတော့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အိမ်တွေရဲ့ ရှေ့မှာ ခေတ္တခဏ ငြိမ်သက်စွာ ရပ်တယ်။ အလှူခံပြီးတဲ့အခါ အခြားနေရာကို ဆက်လက် ထွက်ခွါသွားပါတယ်။
မဟာဝတ္ထုကျမ်း (Mahāvastu) မှာ “ပညာရှိရဟန်းကား မည်သည့်အရာကိုမျှ အလှူမခံ၊ သူတော်ကောင်း ရဟန်းကား သူ့လိုအပ်ချက်ကိုပင် အရိပ်အရောင် မပြ၊ အိမ်ရှေ့တွင် မတ်တပ်ရပ်၍ သပိတ်ကိုသာ လှစ်ပြ၏။ ဤသည်ကား သူတော်မြတ်တို့ ဆွမ်းခံနည်းတည်း” လို့ ဆိုထားပါတယ်။
သပိတ် (ပတ္တ) ဟာ ပရိက္ခာရှစ်ပါး (requisites) မှာ တစ်ပါးအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွမ်းခံရာမှာ အသုံးပြီး အဲဒီသပိတ်နဲ့ပဲ ဆွမ်းစားကြပါတယ်။ ဆွမ်းခံခြင်းဓလေ့ဟာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ ကွယ်ပျောက်လုနီးပါး ဖြစ်သွားပြီး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာတော့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဆက်လက် ကျင့်သုံးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သပိတ်မှောက်ခြင်း - ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန (Turning Over the Bowl) ကိုလည်း ကြည့်ပါ။
(S. Dhammika ရဲ့ A Guide To Buddhism A to Z စာအုပ်မှ ထုတ်နှုတ် ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။)
Alms gathering (piṇḍapāta) is the means by which Buddhist monks and nuns get their food. This practice differs from begging. A beggar asks or pleads for alms whereas Buddhist monks and nuns only present themselves at the door ofapotential donor, stand quietly forafew moments and after receiving something, move on.
The Mahāvastu says: ‘The wise monk asks for nothing, the noble ones do not hint of their needs. They just stand and let their bowl be seen. This is how the noble ones gather alms.’
The bowl (patta) in which the food is received and later eaten out of, is one of the eight requisites of monks and nuns. The practice of gathering alms has almost died in Sri Lanka but is still common in Burma and Thailand. See Turning Over The Bowl.
မူရင်းဝက်ဆိုက်ဘ်လိပ်စာ ကြည့်လိုပါက = Click here
Posted by Ashin Lokapala at 8.8.150comments
ဖန်ဆင်းရှင် သံသယဝါဒ (AGNOSTICISM)
ဖန်ဆင်းရှင် ထာဝရဘုရားသခင် ရှိတယ်ဆိုတာ သိဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ဒဿနအမြင်ကို ဖန်ဆင်းရှင် သံသယဝါဒလို့ ခေါ်ပါတယ်။ တချို့က မြတ်စွာဘုရားကို ဖန်ဆင်းရှင် သံသယဝါဒီလို့ တံဆိပ်ကပ်ကြတယ်။ ဒီအချက်က လုံးဝ မှန်ကန်မှု မရှိပါဘူး။ မြတ်စွာဘုရားဟာ ဖန်ဆင်းရှင် တည်ရှိမှုနဲ့ ဖန်ဆင်းရှင် ထာဝရဘုရားရဲ့ သဘာဝကို မေးခွန်းထုတ်ခဲတာ မှန်တယ်။ ဒါကလည်း သူနဲ့ ခေတ်ပြိုင် ထိပ်တန်း ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်ပညာရှင် အများစုက အဲဒီအကြောင်းကို အလေးထားပြီး မဆွေးနွေးခဲ့ကြလို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျိန်းဘာသာ (Jainism) ကို တည်ထောင်သူ မဟာဝီရ၊ ပုရာဏကဿပ၊ မက္ခလိဂေါသာလ၊ အဇိတကေသကမ္ဗလနဲ့ မြတ်စွာဘုရားတို့ အားလုံးဟာ ဖန်ဆင်းရှင် အယူအဆကို သူတို့ရဲ့ ဘာသာရေးဒဿနမှာ လုံးဝ နေရာ မပေးခဲ့ကြဘူး။ ဖန်ဆင်းရှင် အယူအဆကို ဆွေးနွေးတဲ့အခါ မြတ်စွာဘုရားဟာ သူရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချပြခဲ့တယ်။ အထောက်အထား၊ ယုတ္တိဗေဒနဲ့ လူ့ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာအရ ခိုင်လုံမှု၊ လျော်ကန်သင့်မြတ်မှု မရှိလို့ ဖန်ဆင်းရှင် အယူအဆကို ငြင်းပယ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
ဥပမာပြရရင် မြတ်စွာဘုရားက အဂုင်္တ္ထိုရ်ပါဠိတော်မှာ ဖန်ဆင်းရှင် ထာဝရဘုရားရဲ့ အရာအားလုံးကို သိမြင်ခြင်း (Omniscience) ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း (Free Will) တို့ ဆန့်ကျင်ပုံကို ဆွေးနွေးထားတယ်။
"လူတွေရဲ့ ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ ချမ်းသာဆင်းရဲ မဟုတ်တဲ့ ခံစားမှု မှန်သမျှဟာ လောကကို ဖန်ဆင်းသူ ထာဝရဘုရားရှင်ရဲ့ အလိုဆန္ဒတော် အတိုင်းသာ ဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့ အယူဝါဒ ကိုင်ဆွဲထားသူ သမဏဗြဟ္မဏ (ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်) တွေ ရှိကြတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆီ ချည်းကပ်ပြီး သူတို့ ဒီလိုယူဆတာ ဟုတ်၊ မဟုတ် မေးတယ်။ သူတို့ကလည်း ဟုတ်မှန်ကြောင်း ဖြေကြပါတယ်။
အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို “သင်တို့ ပြောသလိုသာဆိုရင် လူတစ်ယောက်ဟာ လူသတ်သမား၊ သူခိုးဂျပိုး၊ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်သူ၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူ၊ အယုတ္တအနတ္တ ပြောသူ၊ လောဘဇောတက်သူ၊ ဒေါသအမြက် ခက်ထန်တဲ့ တိတ္ထိ ဖြစ်နေခဲ့ရင် ဒါတွေ အားလုံးဟာ ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ အလိုတော်ကျ အတိုင်းသာ ဖြစ်ရမယ်။ အားလုံးရဲ့ အဖြေကို ဖန်ဆင်းရှင် ထာဝရဘုရားအပေါ်ကိုပဲ ပုံချထားရင် လုပ်သင့်တာကို လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်၊ မလုပ်သင့်တာကို ရှောင်ကြဉ်လိုစိတ်တွေ ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ သတိလက်လွှတ်နေသူတွေ ဖြစ်လို့ အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို သမဏဗြဟ္မဏ လို့တောင် ရိုးရိုးသားသား ခေါ်လို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒီနည်းနဲ့ မိစ္ဆာဝါဒ ကိုင်ဆွဲထားသူတွေကို စကားစစ်ထိုးခဲ့တယ်” (အံ၊၁၊၁၇၅)။
ဖန်ဆင်းရှင် ထာဝရဘုရားဟာ အနန္တတန်ခိုးရှင်၊ မဟာကရုဏာရှင် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အဆိုနဲ့ လောကတစ်ခွင်မှာ တွေ့မြင်နေရတဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေ၊ မကောင်းမှု ဒုစရိုက်တွေ ဝိရောဓိ ဖြစ်နေပုံကို ငါးရာ့ငါးဆယ်ဇာတ်တော် (Jātaka) က မီးမောင်းထိုးပြထားတယ်။ “ဖန်ဆင်းရှင် ထာဝရဘုရားရှင်က ဘာ့ကြောင့် လောကကြီးကို သာယာဖြောင့်ဖြူးအောင် မဖန်တီးခဲ့သလဲ။
သူသာ ကမ္ဘာလောကကြီးကို ထိန်းချုပ်သူ၊ အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၊ လောကသားတို့၏ အရှင်သခင် ဖြစ်ရိုးမှန်ရင် ဘာ့ကြောင့် လောကကြီး တစ်ခုလုံး ရှုတ်ထွေးပွေလီ ကမောက်ကမ ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသလဲ။ ပျော်စရာ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်အောင် ဘာ့ကြောင့် မဖန်တီးခဲ့သလဲ။ သူသာ လောကကြီးကို ဖန်ဆင်းသူ၊ အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၊ လောကသားတို့၏ အရှင်သခင် ဖြစ်ရိုးမှန်လျှင် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု၊ ထောင်လွှားမောက်မာမှု၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းမှုတွေ ဘာ့ကြောင့် လွှမ်းမိုးနေရသလဲ။ သူသာ လောကကြီးကို ဖန်ဆင်းသူ၊ အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၊ လောကသားတို့၏ အရှင်သခင် ဖြစ်ရိုးမှန်လျှင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှ မကောင်းမှု ဒုစရိုက်တွေကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးခဲ့သူ ဖြစ်လို့ သူကိုယ်တိုင်ပဲ တရားနည်းလမ်း မကျသူ၊ ယုတ်မာရက်စက်သူ ဖြစ်မှာပဲ” (ဇာ၊ဋ္ဌ၊၇၊၅၆)။
အထက်က မိန့်ကြားချက်တွေ သာမက ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဘယ် ဟောကြားချက်မှာမှ ဖန်ဆင်းရှင် သံသယဝါဒ အရိပ်အရောင် မတွေ့ရဘူး။
အပြဋ္ဌာန်းခံဝါဒ (Determinism) နဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒ (Theism) တို့ကိုလည်း ကြည့်ပါ။
Agnosticism is the philosophical position that it is impossible to know anything certain about God. It is sometimes said that the Buddha was an agnostic, but this is not correct. It is true that he rarely addressed questions concerning the existence or nature of God, but this was only because such questions were not being discussed by the leading religious thinkers of the time. Neither Mahāvīra, the founder of Jainism, Pūrana Kassapa, Makkhali Gosāla, Ajita Kesakambalī nor the Buddha himself, gave the concept ofasupreme being any place in their philosophies. And when the god-idea was discussed, the Buddha made his position certain and clear – he rejected it as evidentially, logically and morally untenable.
In the Aṅguttara Nikāya, for example, he discusses the problem of the contradiction between God’s supposed omnipotence and free will.
‘There are some monks and priests who believe that whatever pleasant, painful or neutral experience someone has, all that is due toasupreme god. I approached them and asked if they believed this and they said they did.
Then I said, “So according to you, if someone isamurderer, thief, adulterer or liar,afoul-mouth, greedy, hate-filled heretic, all that must be due toasupreme god.” When someone falls back onasupreme god as the answer, there (should logically be) no will to do, no desire to do, no necessity to do this or avoid that. Suchaperson is confused, vulnerable and cannot honestly call themselvesatrue monk or priest. This is my rightful refutation to those who believe such ideas, such views.’ (A.I,174).
The Jātaka highlights the contradiction between the claim that God is an omnipotent, loving deity and the undeniable cruelty and evil found in the world. ‘Why does God not straighten out the world? If he really is the Controller, the Highest, Lord of All Beings, why is the whole world in suchamess? Why did he not make the world happy? If he really is the Controller, the Highest, Lord of All Beings, why is there so much deceit, lies, pride and unrighteousness? If he really is the Controller, the Highest, Lord of All Beings, then he must be unrighteous and cruel because it was he who made everything.’ (Ja.VI,208).
There is nothing agnostic about these or any of the Buddha’s statements concerning God.
See Determinism and Theism.
Posted by Ashin Lokapala at 27.5.150comments
ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒ (ဣဿရနိမ္မာနဝါဒ) ဆိုတာ မဟာကရုဏာရှင်၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်၊ အရာအားလုံးကို သိမြင်သူ ဖြစ်တဲ့ ထာဝရဘုရားသခင်ဟာ ကမ္ဘာလောကကြီး တစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ် လွမ်းမိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝါဒဟာ ရုပ်ဝါဒ (လောကာယတဝါဒ)၊ ကံကြမ္မာပဓာနဝါဒ (ပုဗ္ဗေကတဟေတု)၊ အကြောင်းမဲ့ဝါဒ (အဟေတုက) တို့နဲ့အတူ မိစ္ဆာအယူဝါဒ (၄) မျိုးထဲမှာ တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ် (အံ၊၁၊၁၇၄)။
ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကို အဓိက ကန့်ကွက်ရခြင်း အကြောင်းထဲမှာ ထာဝရဘုရားရှင်ရဲ့ အရည်အချင်း ဂုဏ်ပုဒ်တွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆန့်ကျင်နေတဲ့ အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ “သူသာ (အချို့ နတ်ဘုရားတွေက မိန်းမဖြစ်ပြီး အချို့က ယောက်ျားမိန်းမ ဆိုတဲ့ လိင် မရှိဘူး) ကမ္ဘာလောကကြီးကို အမှန်တကယ် ဖန်ဆင်းခဲ့သူ၊ အရာရာကို ထိန်းချုပ်ထားသူဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခ မှန်သမျှရဲ့ လက်သည်တရားခံဟာ သူပဲ ဖြစ်ရမယ်။ သူသာ ကမ္ဘာကြီးကို ပိုင်စိုးသူ၊ အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၊ လောကသားတို့ရဲ့ အရှင်သခင် ဖြစ်ရိုးမှန်ရင် လှည့်ဖြားမှု၊ လိမ်လည်မှု၊ ထောင်လွှားမှု၊ တရားနည်းလမ်းမကျမှုတွေ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်ပွားနေရသလဲ။ သူသာ လောကကြီးကို ဖန်ဆင်းသူ၊ အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၊ လောကသားတို့ရဲ့ အရှင်သခင် ဖြစ်ရိုးမှန်ရင် ကမ္ဘာမှာ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ မကောင်းမှုဒုစရိုက် မှန်သမျှကို သူကိုယ်တိုင် ဖန်တီးခဲ့သူဖြစ်လို့ သူဟာ တရားနည်းလမ်း မကျသူ၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူ ဖြစ်ရမယ်” (ဇာ၊ဋ္ဌ၊၇၊၅၆)။
ထာဝရဘုရားရှင်ဟာ အမှန်တကယ် အရာရာကို သိမြင်သူ (သဗ္ဗညုတ) (Omniscient) ဆိုရင် လူသားတွေဟာ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် မရှိဘူးလို့ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အမှားအမှန်ကို ဆုံးဖြတ်သူ၊ ကောင်းသူကို ကယ်ပြီး မကောင်းသူကို ပယ်သူ အနေနဲ့ ထာဝရဘုရားရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အပိုဖြစ်သွားတယ်။ သူသာ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဖြစ်ရိုးမှန်ရင် ငလျှင်လှုပ်တာ၊ ရေကြီးတာ၊ စူနာမီ ဖြစ်ပေါ်တာ စတဲ့ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေကို ရပ်တန့်သွားအောင် လုပ်နိုင်ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ မဟာကရုဏာရှင်ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အမြင်အရ လူသားတွေရဲ့ ဘာသာတရားကိုးကွယ်မှု ဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာကြည့်ရင် (၁) နတ်ဘုရား အများအပြား ကိုးကွယ်သောဝါဒ (Polytheism)၊ (၂) နတ်ဘုရား တစ်ဆူတည်း ကိုးကွယ်သောဝါဒ (Monothiesm) နဲ့ (၃) နတ်ဘုရားမဲ့ဝါဒ (non-theism) ဆိုပြီး အဆင့်သုံးဆင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေရာတိုင်းမှာ တစ်ချိန်တည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအတွင်းက လူတိုင်းရဲ့ သန္တာန်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့တော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ရှေးဦးလူသားတွေဟာ သဘာဝဖြစ်စဉ်နှင့် သဘာဝစွမ်းအင် အမျိုးမျိုးကို အမျိုးမျိုးသော နတ်ဒေဝတာများအဖြစ် မှတ်ယူခဲ့ကြတယ်။ နောင်အခါ သဘာဝတရား အားလုံးကိုပဲ တစ်ဆူတည်းသော နတ်ဘုရားအဖြစ် ယူဆကိုးကွယ်လာခဲ့ကြတယ်။ လူသားတွေရဲ့ အမြင့်ဆုံးနဲ့ အတွေ့အကြုံ အကြွယ်ဝဆုံး အဆင့်ရောက်လာတော့ အရာအားလုံးဟာ သဘာဝ ဖြစ်စဉ်အရသာ ဖြစ်ပေါ်နေတာ ဖြစ်တယ်၊ နတ်ဘုရား တစ်ပါးပါးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း မဟုတ်ကြောင်း နားလည် သဘောပေါက်လာကြတယ်။
ဒီအဆင့်သုံးဆင့်ဟာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် (၁) မျိုးနွယ်စုများ စုဖွဲ့နေထိုင်တဲ့ခေတ်၊ (၂) သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်များ အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်၊ (၃) ဒီမိုကရေစီနဲ့ သိပ္ပံအတွေးအခေါ်များ အားကောင်းလာတဲ့ ခေတ်ဆိုတဲ့ ခေတ်သုံးခေတ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ အချက်ကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။
ဖန်ဆင်းရှင် သံသယဝါဒ (AGNOSTICISM) ကိုလည်း ကြည့်ပါ။
Ref: Buddhism: A Non-theistic Religion, H. von Glasenapp, 1970.
Theism (issarakāraṇavāda) is the belief in an all-loving, all-powerful and all-knowing God who created and controls the universe. It is one of the four false views (A.I,173), together with materialism (lokāyatavāda), kammic determinism (sabbaṃ pubbekatahetu) and randomism (ahetuvāda).
Buddhism's main objection to theism is that God's supposed attributes contradict each other. If he (some gods are feminine, others have no gender) really created and controls everything then he must be responsible for all the suffering in the world.
`If he really is the Controller, the Highest, Lord of All Beings, why is there so much deceit, lies, pride and unrighteousness? If he really is the Controller, the Highest, Lord of All Beings, then he must be unrighteous and cruel, because it was he who made everything’ (Ja.VI,208).
If God is really omniscient this means that humans have no freedom and thus God's function as arbiter of right and wrong, rewarder of good and punisher of evil, becomes redundant. If God is really all-powerful and can stop massive disasters like earthquakes, floods and tsunamis but does not, he can not be all-loving.
From the Buddhist perspective, human spiritual consciousness could be said to move through three stages: polytheism, monotheism and non-theism, although, of course, not everywhere at the same time or amongst everyone inaparticular society.
Primitive peoples attributed different natural occurrences and forces to different deities. Later, all these were attributed toasingle deity. In its highest and most sophisticated stage, the human mind understands that things happen asapart of the order of nature and not because ofadeity.
It is interesting to note that these three stages roughly correspond to the periods when people lived in tribes, when they were governed by autocratic monarchs and finally when democratic and scientific thinking became dominant. See Agnosticism.
Posted by Ashin Lokapala at 18.5.150comments
ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း (Free Will)
ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း (သစ္ဆန္ဒ) ဆိုတာ ပြင်ပလွမ်းမိုးမှု မပါဘဲ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အရည်အသွေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းဟာ အပြဋ္ဌာန်းခံဝါဒ (Determinism) နဲ့ ပြဒါးတစ်လမ်းသံတစ်လမ်းပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ လူသားတွေဟာ လုံးဝ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လွတ်လပ်မှု ရှိတယ်လို့ မဆိုပါဘူး။ လူသားတွေရဲ့ ကံကြမ္မာကို ပုံသေကားကျ သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့လည်း မယူဆဘူး။ လူသာတွေရဲ့ လွတ်လပ်မှုက အနည်းနဲ့အများ အကန့်အသက် ရှိတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
လူသားတွေရဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်နှင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်တွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ မကျွမ်းကျင်မှု၊ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါ၊ ကျန်းမာရေး၊ အမူအကျင့်၊ ယုံကြည်မှုနဲ့ အခြား အခြေခံ အကြောင်းတရားတွေရဲ့ အောက်မှာ အကန့်အသက် ရှိနေကြောင်း ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရင်း သိနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပညာကလည်း လူသားတွေရဲ့ မသိစိတ် (Unconscious) က လူတွေကို မသိမသာ လွမ်းမိုးနေတတ်တယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျင့်စဉ် အများစုရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက်က မိမိတို့ကို ပြုပြင်ဖန်တီးနေတဲ့ အကြောင်းတရား (သင်္ခါရတရား) တွေကို နားလည်အောင် ကြိုးစားပြီး နောက်ဆုံး အဲဒီအကြောင်းတရားတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်ဟာ ပိုလွတ်လပ်လာပြီး ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို ပြုလုပ်လာနိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Free will (sacchanda) is the ability of the individual to freely choose, without any extraneous influences, what course of action he or she will take. The idea of free will is usually contrasted with determinism. Buddhism does not teach that we have complete freedom or that we are determined, but that our will is conditioned or limited toagreater or lesser extent.
Introspection will reveal to us that our ability to choose and act is often under the influence of and thus limited by our desires, our skill or lack of it, the power of circumstance, our health, the strength of our habits and convictions and numerous other factors. Psychology also tells us that our unconscious may subtly influence us without our knowledge. The purpose of much Buddhist training is to see and understand the factors that condition us and then gradually overcome them. This way we become more free and make better choices.
Posted by Ashin Lokapala at 17.5.150comments